February 9, 2020 - MM Live News
သင်ကိုယ်တိုင်တောင်သတိမထားမိပဲ နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်မိနေတဲ့ အကျင့်ဆိုးများ ကျွန်တော်တို့ အကျင့်ဆိုး ဆိုတာ မျိုးကို ဆေးလိပ်သောက် တာမျိုး ၊ လမ်းဘေးစာတွေ စားတာမျိုးတွေကို သတ်မှတ်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ သတိမထားမိတာ ကတော့ နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ တစ်ချို့ကိစ္စတွေ ဟာလည်း လူကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေ ဆိုတာပါပဲ။ သင်သတိတောင် မထားမိပဲ လုပ်နေမိတဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကို ပြောပြ သွားတော့ မှာပါ။ ၁- သာမန်အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ဆင်ကာ ညအိပ်ခြင်း သင်ကိုယ်တိုင်တောင်သတိမထားမိပဲ နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်မိနေတဲ့ အကျင့်ဆိုးများ တကယ်တော့ သာမန် အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ဆင်ပြီး အိပ်စက်ခြင်းဟာ အလွန်ပူလွန်းတဲ့ အပြင် သက်တောင့် သက်သာ လည်း မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ ညအိပ်တဲ့ […]
ရှတေိဂုံဘုရား မွအေောကျလိုဏျဂူထဲတှငျ ကြောကျဖွဈသှားသော မောငျကံ…
မောင်ကံဆိုတာ ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ပန်းရောင်းတဲ့ ပန်းရောင်းသမားလေးတစ်ယောက်ပါ။ ရွှေတိဂံဘုရားက စွန့်လိုက်တဲ့ပန်းတွေက ပုဇွန်တောင်ချောင်းကတစ်ဆင့်မျောပါသွားပြီး ပုဇွန်တောင်အရပ်မှာ တောင်လိုပုံနေတာမို့ ပန်းစွန့်တောင်လို့ ခေါ်ရာက ယနေ့ ပုဇွန်တောင်ဟူ၍ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့သောအခါ မောင်ကံတစ်ယောက် ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ပန်းရောင်းနေရင်း ရသေ့ကြီးတစ်ပါး ဘုရားပေါ်တက်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ရသေ့ကြီးက ပန်းရောင်းနေတဲ့ မောင်ကံကို တွေ့လိုက်တော့ ရသေ့ကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာ သူ့အလုပ်ကိစ္စကို ကူညီပေးနိုင်တဲ့သူလို့ တွေးမိပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ မောင်ကံဆီက အကူအညီတောင်းဖို့ သူ့အနားကို ရောက်လာပါတော့တယ်။ သူ့ထံကို လမ်းလျှောက်လာတဲ့ ရသေ့ကြီးကို မြင်တော့ မောင်ကံဟာ ဘရသေ့ကြီး ပန်းဝယ်မလို့လား ဒါဆိုရင်တော့ မဝယ်ပါနဲ့တော့ ကျွန်တော်လှူလိုက်ပါ့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီစကားကို ကြားလိုက်တော့ ရသေ့ကြီးရဲ့ စိတ်မှာ သူဆုံးဖြတ်တာမှန်သွားပြီလို့ ထင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မောင်ကံကို အကူအညီတောင်းတဲ့ စကားဆိုပါတယ်။“လူလေး […]
ဘဝတှေ ကခါးလှနျးတယျ…ကံကွမ်မာအရပဲပေါ့ သားလေး..
ဒီလိုအရွှယ်ဆိုတာ ဘာလုပ်ချင်တယ် မေးလည်း သူတို့လုပ်ချင်တာ ဖြေတာပါပဲ။ နောက်ကြီးလာမှ တလွဲဖြစ်တတ်တာပါပဲ။ ပြီးတော့ ကျောင်းမနေချင်ဘူးလားမေးလို့လည်း ကလေးအခြေအနေကြည့်ရတာ ကျောင်းဆိုတာ ဘာလည်းတောင် သိပုံမပေါ်ပါဘူးဗျာ…။ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ဗျာ …တစ်ချို့က ငွေရှိရဲ့သားနဲ့ ကျောင်းမနေချင်တဲ့ အချိန်မှာ တစ်ချို့က ကျောင်းတက်ချင်လို့ကို မတက်ရတဲ့ အဖြစ်။Thar Gyi သနားဖို့ကောင်းတဲ့ကလေးရေ ….ညီလေးရဲ့ဘဝက အဲလောက်တောင်ဒဏ်ပိရတာလားကွာ ….ကျောင်းနေရမယ်အရွယ် ခုလိုတောင်းရမ်းစားသောက်နေတာ …. တကယ်မိခင်ဆို ကိုယ်သားတွက်ဘယ်လောက်တောင်ရင်နာမလဲ ….အော်အနာဂတ်မှာ ထွန်းတောက်ပမယ်ကြယ်လေးတွေ….ခုဆိုတစ်ချို့က မိတ်တုတ်မိတ်တုတ်ဖြစ်နေပါတော့လား…. ဒီလိုအရွယ်လေးတွေပညာမထောက်နိုင်တောင်မှ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပီးစာသင်မယ်ဆိုမမှားနိုင်ဘူး …ညီလေးရေကြိုးစားမယ်ဆို လူလောကမှာဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ် ဆန္ဒကကိုယ်လိုချင်သလိုရနိုင်တယ် …. ညီလေးဘဝတွက်ကောင်းကျိုးပေးနိုင်ဖို့ရောက်လာပါစေကွာ…..။Sai Ye Min Thaw unicode ဒီလိုအရှယျဆိုတာ ဘာလုပျခငျြတယျ မေးလညျး သူတို့လုပျခငျြတာ ဖွတောပါပဲ။ နောကျကွီးလာမှ တလှဲဖွဈတတျတာပါပဲ။ ပွီးတော့ ကြောငျးမနခေငျြဘူးလားမေးလို့လညျး […]
ဒီမနကျစောစောပိုငျးမှာ ထိုငျးနိုငျငံက ပွညျသူ ၁၆ ဦးကို ဓါးစာခံလုပျထားသူ တပျကွပျကို အသမေိကွောငျး ကွငွော
“Death is inevitable for everyone” Terminal 21 ကုန်တိုက်ရဲ့ ၄လွှာမှာ ဓါးစာခံ​တွေနဲ့အတူရှိ​နေတဲ့ ​ သေနတ်သမားစစ်သားကို ဒီမနက်​စော​စောပိုင်းမှာ ထိုင်းအထူးတပ်ဖွဲ့က အ​သေပစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်… သေနတ်သမားစစ်သားဟာ ပထမလက်နက်တိုက်အ​စောင့်စစ်သား ၂​ယောက်ကို ပစ်သတ်ပြီး​တော့ လက်နက်​ရွေးယူ၊ အထက်အရာရှိကိုလဲ ဝင်ပစ်သတ်ပြီး​တော့ လမ်းတ​လျောက်လဲ ပစ်စတ်ခဲ့​သေးတယ်။ ကုန်တိုက်​ရောက်၊ ကုန်တိုက်အပြင်မှာ ဈေးဝယ်လာသူအရပ်သား​တွေကို နေ့လည် ၂နာရီခွဲ​လောက်က စပစ်သတ်တယ်၊ တက္ကစီယာဉ်​မောင်း၊ ဆိုင်ကယ်ရီ၊ ​ကျောင်းသူ ​တွေ့မြင်ရာပစ်သတ်တယ်၊ရဲ ၂​ယောက်၊ ​ရှေ့​နေ ၂​ယောက်ပစ်သတ်ခံရတယ်။ ဒီမနက် တရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းက၂၁ ​ယောက်​သေတယ်၊ ၃၀ ဒါဏ်ရာရတယ်၊ ​သေနတ်သမားကို အ​သေပစ်သတ်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။​​သေနတ်သမားဟာ ​သူရဲ့လှုပ်ရှားမှု့​တွေကို ဖေ့ဘွတ်​တောက်​​လျောက်တင်ခဲ့တယ်…. ပစ်ခတ်မှု့မစခင်အချိန်မှာ”Death is inevitable for everyone”ဆိုတာကို ပို့စ်မက်​ဆေ့တင်ခဲ့တယ်တွေ၊ပစ်ခတ်ပြီး​တော့လည်းတင်တယ်။ကုန်တိုက်​ရှေ့က စား​သောက်ဆိုင်ကဂတ်စ်အိုးကိုရုပ်ရှင်​တွေထဲကလို ​သေနတ်နဲ့ ပစ်မီး​​​​လောင်လုပ်ပီးဆယ်ဖီပို့စ်လည်းတင်ခဲ့တယ်။ […]
February 9, 2020 February 11, 2020 MM Live News
ဆရာမ သမီး ကျောင်းထွက်လိုက်ရပြီ။ အရင်ကလို သုံးလပိုင်းထိ မတက်ရဘူးလို့ထင်လို့ အမေက သမီး ခ (ကလေးအတွက် “ပဲ” ကောက်ခ ကြိုတင်ယူ)…. “ပဲ” ခူး ပေး ယူထားလို့ အခု သမီး “ပဲ”ပြန်ခူးရတော့မယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျောင်းထွက်ရတော့မယ်။ဒီနှစ်သမီးတို့ အကြွေးတွေ ပတ်နေလို့ပါ။ မိဘတွေ စိတ်ဆင်းရဲတာကို မကြည့်ရက်လို့ပါ။ ဒီလိုကလေးတွေ…. ဘယ်လောက်များများရှိနေလဲ???? ဘယ်လောက်များများရှိလာမှာလဲ???? ရှိမလာစေချင်တာရင်ထဲကဆန္ဒအမှန်ပါ။ #ဆရာမ‌လေးမြသားသွင် unicode ဆရာမ သမီး ကြောငျးထှကျလိုကျရပွီ။ အရငျကလို သုံးလပိုငျးထိ မတကျရဘူးလို့ထငျလို့ အမကေ သမီး ခ (ကလေးအတှကျ “ပဲ” ကောကျခ ကွိုတငျယူ)…. “ပဲ” ခူး ပေး ယူထားလို့ အခု သမီး “ပဲ”ပွနျခူးရတော့မယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ကြောငျးထှကျရတော့မယျ။ဒီနှဈသမီးတို့ […]
“အမကေိုယျတိုငျ ဒီဇိုငျးဆှဲပွီး လုပျပေးတာနျော ခယျြရီ” တဲ့ ….
“အမေကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး လုပ်ပေးတာနော် ချယ်ရီ” တဲ့ …. ဒီလိုပုံမျိုးလေးတွေ မြင်ရတဲ့အခါတိုင်း ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေမှာ တိုင်ပင်ဖော် သားတွေသမီးတွေ မြေးတွေနဲ့ မဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အမေ့ကို စာနာမိတယ်။ ဒီအမေကြီး တဒင်္ဂလေး ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတာ တွေ့ရရင်ကို ကျေနပ်တယ်…. ဒီအမေကြီးက ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေအတွက် သူ့နှလုံးသားကိုရင်းပြီး အနစ်နာခံ ပေးဆပ်နေတဲ့ မိခင်ကြီးမို့လို့ပါ။ Credit; Thiha Minwai & ရဲသွေးနည် unicode “အမကေိုယျတိုငျ ဒီဇိုငျးဆှဲပွီး လုပျပေးတာနျော ခယျြရီ” တဲ့ …. ဒီလိုပုံမြိုးလေးတှေ မွငျရတဲ့အခါတိုငျး ဘဝရဲ့အရေးကွီးတဲ့အခြိနျတှမှော တိုငျပငျဖျော သားတှသေမီးတှေ မွေးတှနေဲ့ မဖွတျသနျးခဲ့ရတဲ့ အမကေို့ စာနာမိတယျ။ ဒီအမကွေီး တဒင်ျဂလေး ပြျောရှငျကွညျနူးနတော တှရေ့ရငျကို […]